Ụlọ ọrụ Gas - onye na-emepụta ihe, ụlọ ọrụ, onye na-ebu si China
(Total 24 Ngwaahịa maka Ụlọ ọrụ Gas)
60w Ìhè nke Igodo nke Uhie na- egbutu ụgwọ eletrik gị ruo 80% site na dochie 500W na 60W! Ebe a na-enwu ọkụ ọkụ maka ọkụ gasị na- ejide DLC asambodo maka nkwụsịghachi nke ike kachasị mma site n'aka onye na-eweta ume ọkụkụ gị. Ogwe ọkụ na-emepụta gas na- ezere ihe ọkụkụ na ọkụ ọkụ. A na-eme ka ìhè anyị na-amụnye...
150Watts Gas Station Canopy Light Fixtures
Ụlọ ọkụ na-ekpuchi ọkụ na-emepụta ihe dị iche iche na-eme ka a na-emepụta ihe dị iche iche na-ekpo ọkụ, na-ejikọta ihe ndị ọhụrụ na-arụ ọrụ na teknụzụ ọkụ na ihu igwe. Ụlọ ọrụ gas na -eme ka ìhè dị elu nke dị 70,000HRS dị mma, ọdịmma ya maka dochie ihe nkedo nke dị na 80-250W, nke nwere ike iji nweta ikike nke 80%...
60W Led Gas Station Canopy Lighting Fixtures
Ụlọ ọrụ gas anyị bụ IP65, nke a kwadebere maka ọdụ gas na ọdụ ụgbọ oloko. Ụlọ ọrụ ọkụ a na-emepụta gas ga-adị mma ma ọ bụrụ na a kwadoro ya. Ike ikpu ọkụ Gas nwere 60W, 100W, 130W na 150W ike dị iche iche maka nhọrọ. Ebe anyị na-anọ ọdụ ụgbọ mmiri na-eduzi anyị bụ ihe dị mma na-adọrọ mmasị ma na-achọ mma, dị mfe iji...
Ụlọ ọrụ ụgbọ mmiri a nke gas na -ekpuchi ugwu, ugwu nkwụsịtụ na oge nkedo. Ụlọ ọrụ gas anyị na-eji ọkụ ọkụ na- eji ejiji anụ ụlọ na-eme ka ọ dịkwuo ọkụ na-ekpo ọkụ. Bulb Canopy bụ e xcellent maka ngwa ndị dị ka ụgbọ ala gas, ebe a na-adọba ụgbọala na ebe nchekwa. Bbier 150 watt ada ìhè mkpuchi si na ngụcha ájá na...
Ụlọ ọrụ gas weere ìhè ọkụ 100W
Nke a 100w Led Gas Station Canopy Light bụ 12000-lumen mmepụta iji kpochapụ ụgbọ elu ụgbọ ala, ebe gas, ụzọ mgbaba, mgbatị, ụgbọala ma ọ bụ ihe ọ bụla ọzọ nnukwu ọkụ ọkụ ọnọdụ Ụlọ Osimiri Gas nke 100W nwere ike ịmalite iji ike 120 lm / W tụnyere windo 300W MH / HPS. Okpokoro na-egbuke egbuke na nkwonkwo ọkụ siri ike,...
150W Ụlọ ụgbọ elu ụgbọ mmiri na-enwu
Ụlọ ọrụ gas anyị weere ìhè 150W na-eme ka ịchọta ngwa ngwa na ngwa ngwa dị ọkụ nke dịnụ, ebe a na- emepụta gas nke a na-eji ọkụ 120LM / W na-enwe ike ịzọpụta ma na-arụ ọrụ nke ọma maka 600 watt metal halide na mgbatị dị elu nke sodium. Ụlọ ọrụ mmanụ ụgbọ mmiri 150w nke 150w nwere ike ịrụ ọrụ ike karịa 95% na ogologo...
130W Enwere ike ịmalite ikpo ọkụ ụgbọ mmiri
Igwe a 130W na-ekpuchi Led Gas Canopy Lights na- enwe 15600 lumens na ogo ihu nke ogo 120. Ebube ndị a maka ikpo ọkụ gas nwere ike ịnweta CRI nke 80 ma nwee ike inye ọkụ ọkụ, 5000K ma n'èzí na ime ụlọ. Ejiri Mgbaba Ụlọ Ọrụ Gas a nwere njedebe Ingress nke 65, nke pụtara uzuzu kpuchie ma chebe ya pụọ ​​na mmiri si...
Ụlọ ọrụ Gas Ụlọ ọrụ gas Ụlọ ọrụ DLC Gas Ebube Ụlọ Ọrụ Gara Ụlọ ọkụ ọkụ gas Ụlọ ọrụ gas weere ìhè Igwe Ụlọ Ọrụ Na-ere Ụlọ ọkụ na Tennis Tennis